HandBrake: yakanakisa multimedia transcoder yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kune akasiyana mafomu anogona kutibatsira nekutenderera emafaira edu emultimedia, ayo mazhinji acho anotarisisa mamwe mafomati, angave odhiyo kana vhidhiyo.
Kana iwe uchida kuchengetedza DVD kana kubvarura bhaisikopo kune akawanda mafomati anotsigirwa nazvino nhare mbozha, nhasi tiri kuzotaura nezve yakakurumbira kunyorera izvo zvirokwazvo vazhinji vevaverengi vedu vanenge vatoziva, iko kunyorera kwatichataura nezvako nhasi kunonzi HandBrake.
1 Nezve HandBrake
HandBrake chirongwa chemahara uye chakavhurika sosi yekuverenga kwakawanda kuverenga yeaudio nemavhidhiyo mafaera, eOS X, GNU / Linux uye Windows.
HandBrake inoshandisa maraibhurari echitatu-bato, senge Fmpmpeg uye FAAC.Izvi zvinhu zvinogona kunge zvisiri pasi pemitemo yakafanana yelayisensi seBrandBrake. 4
Purogiramu zvakare chishandiso chekubvarura maDVD, chinja mafirimu kuva MPEG-4 uye nezvimwe zvakawanda.
Pamusoro pekupa sarudzo dzakasiyana dzekumisikidza, zvinokutendera iwe kuisa iyo yaunoda ngano zvakananga mune yekupedzisira mhedzisiro.
Iyo yekushandisa interface yakajairwa uye vese vanotanga uye vane ruzivo vanhu vanogona nyore kujairira chirongwa ichi.
Unogona kuendesa DVD dhairekodhi kana vhidhiyo faira uchishandisa iyo faira browser kana yekuzvuva-uye-kudonhedza nzira.
Ipapo iwe unogona kusarudza musoro uye zvitsauko, preset, kuburitsa fomati yekuenda, pamwe nekumisikidza masetingi usati watanga kuita kwekodhi
Iwe unogona kuisa akawanda mafirita kubva vhidhiyo (grayscale, detelecine, decomb, deinterlace, denoise, kuvhura), pamwe nekugadzirisa vhidhiyo codec (H.264, H.265, MPEG-4, MPEG-2, VP8, Theora) uye furemu rate yemhando, odhiyo odhiyo ( AAC, HE-AAC, MP3, AC3, OGG), sanganisa, muyero muyero uye zvishoma chiyero.
Uyewo, inogona kuwedzera, kudzima kana kupinza zvinyorwa zvidiki (Fomati yeSRT chete) uye gonesa "Kumanikidzwa chete", "Rakarekodwa" uye "Default" sarudzo, gadzira mamaki echitsauko uye upinze / kutumira kunze CSV faira.
Kana zvasvika pane zvakasarudzika sarudzo, unogona kusarudza nzira yekukodha (eg mafuremu ereferenzi), psychovisual, ongororo (semuenzaniso "Adaptive Direct Mode"), rudzi rwekuparadzanisa, kuvhura uye nevamwe.
Uyewo, unogona kuongorora mhedzisiro, gadzira runyorwa rwebasa (kureva shanduko yebatch), kuendesa kunze uye kutumira kunze zvigadzirwa, gadzira marongero epurogiramu, uye nezvimwe.
Iyi software inowanzo kuverengerwa mukusiyana kwakasiyana kweLinux, saka iwe unongofanirwa kutarisa mune yako yekunyorera menyu muchikamu che multimedia kana muvhidhiyo / vhidhiyo yekugadzirisa kunyorera.
Kana iwe usina ichi chishandiso chakaiswa, unogona kuzviita nekutevera nhanho dzandinogovana newe.
Para avo vari vashandisi veUbuntu, Linux Mint kana chero kugoverwa kunobva pane izvi Tinogona kuwedzera dura kune iyo system kuti igare iine yazvino vhezheni vhezheni ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » HandBrake: yakanakisa multimedia transcoder yeLinux